I-50 + iZikolo zeZonyango eziGqwesileyo eMelika ngeZinto ezahlukeneyo zoMsebenzi 2022
Matshi 1, 2022 Eze uThadayo
Unomdla wokuya kwisikolo semed? Funda ngezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US ezidwelisiweyo zaxoxwa kule posi ukunceda ukungeniswa kwakho. Kwakhona, iinkcukacha malunga nezinto ezahlukeneyo ezenziwa kwisikolo semed zixutyushwa ngokubanzi ukukunceda ukhethe ukuba yeyiphi indawo yezonyango ekufaneleyo kunye nendlela yokufaka isicelo kubo.
I-United States yaziwa ngezinto ezininzi kubandakanya ukuba neyona yunivesithi zibalaseleyo kunye neekholeji emhlabeni. Izikolo ezithandwayo ze-Ivy League zibekwe apha kwaye abafundi abaza apha-e-US-bazifundele ngokuzenzekelayo bafumana ukhuphiswano kubasebenzi xa kuthelekiswa nabafundi abafumene isidanga sabo kwenye indawo.
Nangona amazwe afana neCanada neOstreliya ekhuphisana kanye nase-US ngokuba namaziko emfundo aphakamileyo ehlabathini. Ezi ndawo zintathu ziindawo zemfundo ephezulu kwihlabathi liphela, kwaye amaziko akho akhuphisana kakhulu ukufumana ukungena.
Njengazo zonke iindawo, iUnited States inezikolo zonyango ezikumgangatho ophambili kwihlabathi kwaye, njengoko usenokuba uqikelele, bakhuphisana kakhulu ukufumana ukungena ngokukodwa kwabafundi bamanye amazwe. Ukuba unqwenela ukulandela isidanga sobugqirha e-US nokuba ungumfundi wamazwe aphesheya okanye wasekhaya, esi sithuba siqulathe iinkcukacha ezibalulekileyo ezinje ngeemfuno zokwamkelwa, inkqubo yokwenza isicelo, njl njl.
Kukho amasebe ahlukeneyo amayeza anje ngezifo zabantwana, i-cardiology, i-osteopathy, i-psychiatry, kunye nokunye. Izidingo zemfundo kwelinye lala masebe amayeza kunye nezikolo ezibonelela ngeenkqubo zaseMelika zichaziwe kwaye zaxoxwa apha.
Kuthatha ntoni ukungena kwezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US?
Zeziphi izikolo zonyango zamanye amazwe ezenza okusemandleni kumdlalo wase-US?
Sisiphi esona # 1 isikolo sonyango e-US?
Izikolo eziBalaseleyo zeZonyango eMelika
Isikolo seGrossman yezoNyango
Yunivesithi yaseJohn Hopkins
IPerelman School of Medicine
ISikole seYunivesithi yaseStanford
Ikholeji yaseColumbia Vagelos yoGqirha noGqirha
Ikliniki yaseMayo Alix yeSikolo sezoNyango
UCLA uDavid Geffen weSikolo sezoNyango
IYunivesithi yeSan Francisco School of Medicine
Isikolo seYunivesithi yaseWashington
Ezona zikolo ziPhambili zoNyango eMelika
Izikolo eziBalaseleyo zeZonyango eMelika zoNyango
Ezona zikolo ziGqibeleleyo zezoNyango eMelika
Ezona zikolo ziGqwesileyo zikaRhulumente eMelika
Ezona zikolo ziBalaseleyo kwezonyango e-US zeNeurosurgery
Ezona zikolo ziBalaseleyo kwezonyango e-US zePediatrics
Ezona zikolo ziBalaseleyo zeOsteopathic eMelika
Izikolo eziBalaseleyo zeZonyango eMelika zeCardiology
Ezona zikolo ziBalaseleyo kwezonyango e-US zenzululwazi yengqondo
Ukufumana ukungena kwezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US kuya kufuneka uqaqambe kakhulu kwaye uqhutyelwe yinjongo yokuba ngumqeqeshi ophumeleleyo kwezonyango. Kangangokuba oku kunokuba nengqondo kuwe kwaye kubonakale ngathi ayisiyiyo, kuya kufuneka uphinde ube nokugqwesa kwizifundo kunye namanye amaxwebhu adweliswe apha ngezantsi:
Diploma yesikolo esiphakamileyo
Isidanga sokuqala kwisayensi okanye kwisikolo esenziwe kwangaphambili ubuncinci be-GPA ubuncinci be-3.8
Amanqaku angafakwanga kwi-TOEFL okanye kwi-IELTS
Iileta zezindululo, i-CV / ukuqhubeka kwakhona, ingxelo yenjongo, kunye ne-visa yabafundi okanye imvume yokufunda (abafaki zicelo bamanye amazwe kuphela)
Iziphumo zeMCAT (amanqaku asetwa ziiyunivesithi kwaye ayahluka nawo)
Ezi zizinto ezisisiseko ekufuneka uzihlanganisile ngaphambi kokufaka isicelo sazo naziphi na ezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US. Ngelixa ezinye izikolo zinokufuna ngaphezulu kokudweliswe apha, ezinye zinokufuna ngaphantsi, ziyahluka ngokwasesikolweni.
IYunivesithi yaseBen-Gurion ye-Negev's - IYunivesithi yaseColumbia yezoNyango yeMpilo yeHlabathi
Isikolo iRoss University Medical School (eDominica)
IUniversidad Autonoma de Guadalajara School of Medicine (Mexico)
Sackler Medical School, kwiYunivesithi yaseTel Aviv
IYunivesithi yaseGeorge, eGrenada
Inkqubo yeTekhnoloji yaseMelika yeZonyango (kwaSirayeli)
IYunivesithi yaseDuke - iYunivesithi yeSizwe yaseSingapore
IYunivesithi yaseQueensland - iNkqubo yeOchsner (Australia naseNew Zealand)
IHarvard Medical School sesona sikolo sonyango siphezulu eUnited States.
Okokuqala, siza kuthetha ngezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US ngaphambi kokuya kuqeqesho ngalunye olunikezelwa zizikolo zemed. Ngaphandle kokuqhubela phambili, masiqale…
IHarvard Medical School sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseHarvard, esinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US, eneneni, ngaphezulu koluhlu, iziko lilonke yenye yeeyunivesithi ze-8 Ivy League e-US, kunye nenqanaba phakathi kwezona zibalaseleyo amaziko emfundo aphakamileyo kwihlabathi. IHarvard ithandwa kakhulu, ngaphandle kwamathandabuzo, ke, kuyinto eqhelekileyo ukuba isikolo sayo sezonyango sibe sesona sihle eMelika.
Isikolo sasekwa kwi-1967 kunye nendawo esikuyo eBoston kwaye sinabhaliso lwabafundi abangama-700 bonke kwizifundo ezisisigxina. Abafundi bamanye amazwe bamkelwe kwisikolo sezonyango ukuba baqhubeke nesidanga se-bachelor's okanye i-MD isidanga kodwa kunokuba nokukhuphisana kakhulu kubantu bamanye amazwe.
Imali yokufaka isicelo kwiHarvard Medical School yi- $ 100 kwaye imali yokufunda yi- $ 64,984 yabafundi bamanye amazwe kunye ne-65,203 yabafundi basekhaya. Iimfuneko zokufunda zibandakanya umndilili we-GPA ye-3.94 kunye nomndilili we-MCAT we-520 oza kuthathelwa ingqalelo yokwamkelwa.
IGrossman School of Medicine sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US nakwisikolo sezonyango kwiYunivesithi yaseNew York eManhattan, eNew York. Yayisungulwa kwi-1841 kwaye ukusukela ngoku ibonelela ngeyona nqanaba liphezulu kwezonyango e-US nakwihlabathi.
Imali yesicelo yi- $ 110 kwaye inemfuno ephezulu yokufunda kwi-GPA ephakathi ye-3.93 kunye nenqaku le-MCAT lama-522.
IYunivesithi yaseJohn Hopkins ithandwa kakhulu kwimfundo yayo yezonyango e-Baltimore, esekwe kwi-1893, kwaye ibekwa phakathi kwezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US nakwihlabathi. Imali yokufunda yi- $ 56,500 yabafundi basekhaya kunye ne- $ 60,749 yabafundi bamanye amazwe abanomrhumo wesicelo se- $ 100.
Isikolo sezonyango sikhetha eyona ilungileyo kubafundi abenza ukwamkelwa bakhuphisane kakhulu. Phakathi kweemfuno zokungena kwizifundo kubandakanya i-avareji yeGPA ye-3.95 kunye nenqaku le-MCAT lama-521. Abafundi beYunivesithi yaseJohns Hopkins bafunda ngezifundo zokudibanisa izifundiswa zeGenesis to Society Curriculum ezinamava afanayo eklinikhi.
IPerelman School of Medicine ibisoloko ikwisikhundla sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US. Ingxelo ye-US News World Report kunye namaXesha eMfundo ePhakamileyo ayibeka phakathi kwezona zikolo ziphambili zibaluleke kakhulu kwezonyango e-US. UPerelman sisikolo sezonyango kwiYunivesithi yasePennsylvania kwaye sinabafundi abangama-10.
Abafundi banokufumana i-MD, i-Ph.D., I-MD-PhD, i-master's, i-MD-master's, okanye izidanga zasemva kobugqirha kunye neenkqubo zesatifikethi kwiindawo ezinje ngeMpilo yeHlabathi, impilo yabaseTyhini kunye nokuguga. Umlinganiso we-faculty-student is 4.5: 1 kwaye une-2,773 yexesha elizeleyo kwicandelo labasebenzi.
Imali yesicelo sePerelman School of Medicine yi- $ 100 kunye nemali yokufunda ngokusisigxina yi- $ 59,910 yabafundi abaseburhulumenteni kunye ne- $ 65,343 yabafundi abangaphandle korhulumente ekwabandakanya abafundi bamanye amazwe. Njengazo zonke ezinye izikolo ezikolu luhlu, inqanaba lokwamkelwa kwesi sikolo liphantsi kakhulu ngeemfuno zokungena kwizifundo eziphezulu ezenza ukwamkelwa kukhuphiswano.
Ezinye zeemfuno zokungena kwizifundo zibandakanya umndilili we-GPA ye-3.92 kunye nenqaku le-MCAT le-521.
IYunivesithi yaseStanford ibambe iwonga lokubonelela ngemfundo ekumgangatho wehlabathi kwaye isikolo sezonyango sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US. Yayisungulwa kwi-1908 kwaye inabafundi abakhoyo ngoku be-484 ababhalise kwizifundo ezahlukeneyo zonyango ezilandela iinkosi zemfundo kunye nezidanga zobugqirha.
Ukulandela nayiphi na inkqubo yesidanga eStanford kukhuphiswano kwaye kuyabiza nkqu nakubafundi basekhaya kwaye ukhuphiswano luye luphakame xa kuziwa kwinkqubo yonyango okanye yeshishini. Inqanaba lokwamkelwa kweSikolo iYunivesithi yaseStanford yezoNyango yi-2.3% isenza esinye sezona zikolo zi-3 zikhuphisana kakhulu kwezonyango e-United States nakwihlabathi liphela.
Imali yesicelo ikwayi- $ 100 kwaye umrhumo wokufunda uyi- $ 62,193 yabo bonke abafundi. Uya kudinga i-GPA ephakathi ye-3.98 kunye nenqaku le-MCAT le-519 eliya kuthathelwa ingqalelo yokwamkelwa kwisikolo sezonyango saseStanford.
Eyasungulwa ngo-1767 kwaye ihlala eNew York, i-Columbia Vagelos College ye-Physicians kunye ne-Surgeons iye yahlulwa ngokulandelelana yi-US World News Report kunye namanye amaqonga asezantsi emfundo njengesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US. Isikolo sinembasa yehlabathi yokubonelela ngemfundo yezonyango ekumgangatho wehlabathi kunye nokuvelisa amanye amagqirha kunye noogqirha abaphambili kweli lizwe.
Imali yokufunda iyafana nakwabafundi abakwimeko yaseburhulumenteni nakwabafundi abangaphandle korhulumente kwinqanaba le- $ 65,425 ngonyaka. Imfuno yokungena kwizifundo ikwicala eliphezulu, ukwamkela abafundi ngenqaku eliphakathi le-3.91 GPA kunye nenqaku le-MCAT le-521. Ukuza kuthi ga ngoku, kuya kufuneka uyazi ukuba iqondo lokwamkelwa kwezikolo ezikolu luhlu ziphantsi ngokwenyani njengoko zifuna kuphela egqibelele.
Inqanaba lokwamkelwa kwale kholeji lihleli kwi-3.5% ngomlinganiso wee-faculty zabafundi ze-3.8: 1
Sibekwe phakathi kwezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US, Mayo Clinic Alix School of Medicine ibonelela abafundi ngamava okufunda kumasebe ohlukeneyo amayeza ebaxhobisa ngezakhono zokuba babe ngabona bagqwesileyo kumacandelo abo. Yayisungulwa kwi -1972, ebekwe eRochester, kwaye inenani labafundi ababhalisileyo le-362.
Ngomgangatho wokwamkelwa kwe-2.4% ukungena kwesi sikolo kunokuba nzima kakhulu kwaye unokufuna ukuqaphela ukufaka isicelo kwisikolo sezonyango ngenqanaba lokwamkela eliphezulu. Yintoni enokukutyhafisa ngakumbi yimilinganiselo ye-GPA kunye ne-MCAT ebekwe kwi-3.92 kunye ne-520 ngokwahlukeneyo. Imali yesikolo yi- $ 57,170 yazo zonke iintlobo zabafundi.
IYunivesithi yaseCalifornia ithandwa kakhulu phakathi kwabafundi abaphuma kwisikolo esiphakamileyo, uninzi lwabo lufuna ukulandela isidanga kwiziko eliphezulu. Eliziko libonelela ngeentlobo zeenkqubo kubandakanya iiSayensi zeNtlalo, ubuGcisa noLuntu, amayeza, ishishini nokunye.
I-faculty ebonelela ngeenkqubo zonyango e-UCLA yaziwa ngokuba yiDavid Geffen School of Medicine kwaye esi sikolo sikumgangatho ophakathi kwezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US. Abaphembeleli abajolise ekuqhubekeni nesidanga sokuqala, isidanga senkosi, okanye isidanga sobugqirha kulo naliphi na isebe lamayeza kufuneka basebenzise ngale ndlela
Isikolo se-med siseLos Angeles kwaye sasekwa ngo-1951, esincinci kunezinye izikolo ezikolu luhlu, kwaye sinenani labafundi ababhalisileyo elingu-731. Umndilili we-GPA of 3.85 kunye namanqaku e-MCAT angama-518 ngowona uphantsi Olu luhlu kodwa inqanaba lokwamkelwa lihleli kwi-2.4% oko kuthetha ukuba kukhuphiswano olukhulu ukufumana ukungena.
Imali yokufunda kwabafundi abakwimeko yaseburhulumenteni nakwabangaphandle kwemeko iyahluka kwi- $ 36,752 kunye ne- $ 48,997 ngokwahlukeneyo.
Esi sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US kwaye sinelona zinga liphezulu lokwamkelwa kolu luhlu kwi-3.8%. Amanqaku afunekayo e-GPA kunye ne-MCAT nawo asezantsi kolu luhlu kwi-3.8 kunye ne-518 ngokwahlukeneyo. Umlinganiso weFakhalthi ukuya-kumfundi uhlala kwi-4.3 kwaye unabhaliso olupheleleyo lwe-643 kwizifundo zonyango ezizeleyo.
IYunivesithi yaseSan Francisco, iSikolo sezoNyango sihlala kwi- $ 35,384 kunye ne- $ 47,630 yabafundi basekhaya nakwamanye amazwe ngokwahlukeneyo.
Isikolo iYunivesithi yaseWashington seYunivesithi yezonyango sesinye sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US. Abafundi balapha banokuyila imfundo yabo yezonyango ukuze ilungele iimfuno zabo ngeendlela ezahlukeneyo. Umndilili we-GPA omiselweyo yi-3.93 ngelixa i-MCAT iyi-522 iyenza ibe yenye yezona mfuno ziphambili zemfundo kolu luhlu.
Nangona kunjalo, inqanaba lokwamkelwa lihlala kwicala eliphezulu le-8.2% lelona liphezulu kolu luhlu luhlanganisiweyo lwezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US. Imali yokufunda yomfundi wamanye amazwe yi- $ 66,913 ngonyaka kunye ne- $ 64, 164 yabafundi basekhaya.
Ezi zezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US ezingacwangciswanga ngendlela eyahlukileyo kwaye nokuba zeziphi na ezikolweni ezibonisa umdla wakho, cofa kwi "iwebhusayithi esemthethweni" kwaye ufunde okungakumbi malunga nenkqubo ethile yezonyango ofuna ukuyilandela.
Ukuba unqwenela ukuba yinxalenye yecandelo lezonyango ke igama elithi "isikolo saphambi konyango" akufuneki lisavakala ngathi lintsha ezindlebeni zakho kodwa ukuba eli lixesha lokuqala odibana nalo okanye ungazi ukuba lithetha ntoni, vumela ukuba ndenze iimbeko.
Yintoni isikolo saphambi konyango?
Ngokusisiseko, isikolo sangaphambi konyango ligama elisetyenziselwa nayiphi na ikhosi yekholeji yeminyaka emi-4 ethi ithatyathwe ngumfundi ofuna unyango ngaphambi kokuba aye kwisikolo sezonyango. Ngaphambi kokuba uqhubeke ube yingcali yezonyango, kuya kufuneka uhambe kwisikolo esenziwe kwangaphambili - njengoko kusaziwa njalo- yinxalenye eyimfuneko yoqeqesho logqirha ukuze ube yingcali kwezonyango.
Isikolo esiqingqiweyo sikulungiselela ukwamkelwa kwisikolo semed, ngumgaqo osisikhokelo kwimfundo yakho kwaye wandise amathuba akho okwamkelwa kwizikolo zonyango. Ukungena kwisikolo esenziwe kwangaphambili, awudingi ukuba nolwazi esele lukhona kwicandelo lezonyango endaweni yoko, kulapha apho ulwazi lwakho olusisiseko lomsebenzi wobugqirha luya kwakhiwa ngaphambi kokuba uqhubeke nesikolo kwaye ube ngugqirha.
Iindleko eziqikelelweyo zesikolo esenziwe kwangaphambili e-US ngaphezulu kweminyaka emine kuqikelelwa ukuba yi- $ 150,444 ye-in-state okanye i- $ 247,664 ye-out-of-state.
Izidingo zeSikolo esiPhezulu eMelika
Kukho iimfuno ezithile ekufuneka uhlangabezane nazo ukuze ungene kwisikolo sokuqala e-US, ezi mfuno zihlala zihluka ngokwamaziko kodwa ezisisiseko zezi;
Idiploma yamabanga aphakamileyo okanye iyalingana nabafundi bamanye amazwe
Abafundi abavela kumazwe angathethi isiNgesi kufuneka i-TOEFL okanye i-IELTS kwaye bafumane amanqaku asezantsi e-600 okanye i-6.5 ngokwahlukeneyo.
Amanqaku ovavanyo lwe-SAT / ACT ahlala ehluka ngokwamaziko
Umrhumo wesicelo, uhlala eyi- $ 100 kodwa uyahluka ngeziko
Isiteyitimenti esichaza ukuba kutheni ufuna ukubandakanyeka kwicandelo lezonyango
Iileta ezimbini zokucebisa ezivela kwimfundo okanye kumthombo wobugcisa
Qalisa kwakhona equka imisebenzi yangaphandle oyenzayo okanye imisebenzi yamavolontiya onyango
Onke amaxwebhu asemthethweni
Iziko lakho lokubamba linokufuna zonke ezi zinto kunye nangaphezulu okanye nangaphantsi kunale idweliswe apha, nangona kunjalo, unayo yonke le nto kwipotifoliyo yakho ngaphambi kokuba uqhubeke nophando ngezinye iimfuno ukuze uzilungiselele ngcono.
Ngoku ukuba uyazi malunga nesikolo sangaphambi kokulungiselela kunye neemfuno zokungena kwesinye, ngoku singaya kwizikolo eziphambili zase-US.
IYunivesithi yaseWashington eSaint Louis
I-Western Western Reserve University
Phakathi kwazo zizezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US, kwaye iziphumo zabo zokufunda kwangaphambili zezona zilungileyo eMelika.
Utyando lisebe lezamayeza elinyanga ukonzakala, izifo, kunye neziphene ngokususwa komzimba, ukulungiswa, okanye ukulungiswa kwamalungu kunye nezicubu, zihlala zibandakanya ukusika emzimbeni. Ngaphakathi kweli candelo, umntu unokugxininisa ngakumbi kwiindawo ezinje ngamathambo, i-neurological, i-cardiovascular, okanye i-plastiki, phakathi kwezinye iindawo.
Oogqirha bathathwa njengabona gqirha babalaseleyo kwezonyango, bahlawulwa kakhulu kwaye bayahlonitshwa ngoogxa babo ebaleni. Uya kuzonwabela ezi zibonelelo ukuba uphumelele ngempumelelo kwinkqubo kwaye ube ngugqirha onelayisensi.
Iindleko zokufunda ngotyando e-US ukuya kutsho ekufumaneni iphepha-mvume lakho lobuchwephesha liqikelelwa ukuba liphakathi kwe- $ 250,000 ukuya ngaphezulu kwe- $ 500,000.
Izidingo ezisisiseko zokufundela utyando eMelika zibandakanya;
Ukufumana isidanga se-bachelor okanye ukugqitywa kwenkqubo ecwangcisiweyo enxulumene namayeza afana ne-biology, i-physics, okanye i-chemistry.
Amanqaku e-MCAT ayahluka ngokwamaziko kodwa ungafuna ukujolisa amanqaku angama-510
Abafundi abavela kumazwe angathethi isiNgesi kufuneka bathathe uvavanyo lwe-TOEFL okanye lwe-IELTS kwaye bangenise amanqaku. Amanqaku afunekayo kwiimvavanyo zobuchule besiNgesi ahlala ahluka kwiiyunivesithi
Iileta zengcebiso, ingxelo yenjongo, isincoko, kunye nokuqhubeka kwakhona / i-CV
Ezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US zotyando zidweliswe apha ngezantsi kungekho-odolo;
Izikolo zonyango zesidanga sokuqala ziyafana nezikolo zokuqala kwaye iyababhida abantu abaninzi, iyafana kwaye umahluko kuphela ngamagama abo. Ungasibiza ngokuba sisikolo sonyango okanye isidanga sokuqala.
Iinkcukacha malunga nesikolo esenziwe kwangaphambili sele zikhona inikwe apha ngasentla.
Kukho izikolo zikarhulumente e-US apho ungafundela khona inkqubo yezonyango, ezi zikolo zikarhulumente zitshiphu kwiifizi zezifundo kwaye iimfuno zabo zemfundo zikwalula xa kuthelekiswa nezikolo zabucala zonyango e-US.
Iindleko eziqikelelweyo zezikolo zikarhulumente zonyango e-US kunyaka wokufunda yi- $ 39,150 ye-in-state kunye ne- $ 63,546 ye- out-of-state. Ezi zikolo zikarhulumente zikwabonelela ngeedigri ezaziwayo kwezonyango e-US kwaye uninzi lwezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US ziphakathi kwezi zikolo zikarhulumente.
Ezona zikolo zikarhulumente zikarhulumente zibalaseleyo;
I-NYU Grossman School of Medicine
IYunivesithi yaseOregon yezeMpilo kunye neNzululwazi
IYunivesithi yaseCalifornia, eLos Angeles
IYunivesithi yaseCalifornia, eSan Francisco
I-Neurosurgery lisebe lotyando olujongana nenkqubo yemithambo-luvo. Lukhethekileyo kwezonyango oluchaphazelekayo ekuchongeni nasekunyangeni abaguli abanokwenzakala, okanye izifo / ukuphazamiseka kwengqondo, intambo yomqolo kunye nomqolo womqolo, kunye neeripheral nerves kuwo onke amalungu omzimba.
Ixabiso eliqikelelweyo lokuba yingcali, i-neurosurgeon eqinisekisiweyo e-US inokubiza i- $ 300,000.
Ukufumana ukwamkelwa kwisikolo sezonyango e-US ukuba ufunde nge-neurosurgery, kuya kufuneka uhlangane nezi mfuno zilandelayo zokungena kwizifundo;
Ulwazi lwesiNgesi kubafakizicelo bamanye amazwe okanye abafaki zicelo abavela kumazwe angathethi isiNgesi
Fumana isidanga sokuqala
Thatha i-MCAT kwaye ufake isicelo kwizikolo zonyango
Ezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US ze-neurosurgery zezi;
IYunivesithi yaseWashington eSt. Louis
I-Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Pediatrics Lisebe lezamayeza elijongana nokhathalelo lonyango lwabakwishumi elivisayo, abantwana kunye neentsana. Oogqirha babantwana ngabantu abafundiswe ngokukodwa kwaye baqeqeshelwe ukufumanisa nokunyanga izifo kwizinsana, abantwana nakwishumi elivisayo.
Ezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US zezifo zabantwana zezi;
IYunivesithi yaseCincinnati College of Medicine
I-Osteopathy lisebe leyeza elibandakanya ukukhangela, ukunyanga, kunye nokuthintela iingxaki zempilo ngokuhamba, ukolula, kunye nokuphulula izihlunu zomntu kunye namalungu. Unokuba ngugqirha kunyango lwe-osteopathic (DO) ngokuya kwisikolo sezonyango samkelwe e-US.
Ngaphandle kweendleko zesikolo esenziwe kwangaphambili okanye isikolo sezonyango, uya kuchitha iindleko eziqikelelweyo malunga ne- $ 200,000 kwiminyaka emine ukuze ube ngugqirha one-osteopathic onelayisensi ngokupheleleyo.
Ezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US zokufunda amayeza e-osteopathic zezi;
IYunivesithi yaseMichigan State University yeOsteopathic Medicine
U-Edward Via wekholeji ye-Osteopathic Medicine
I-West Virginia School of Osteopathic Medicine
I-Lake Erie College ye-Osteopathic Medicine
IAlabama College yeOsteopathic Medicine
IKholeji yeTouro yeOsteopathic Medicine
Inkululeko yeekholeji yeYunivesithi yase-Osteopathic Medicine
IYunivesithi yaseNyakatho yeTexas yeZiko lezeMpilo e-Fort Worth College ye-Osteopathic Medicine
ILincoln Memorial University iDeBusk College yeOsteopathic Medicine
Ikholeji yaseOhio yeLifa leMveli yeOsteopathic Medicine
I-Cardiology lisebe lonyango lwangaphakathi olubandakanya ukufundwa kunye nokunyangwa kokuphazamiseka kwentliziyo kunye nemithambo yegazi. Eli sebe lamayeza, i-cardiology, likwabandakanya ukuxilongwa kwezonyango kunye nonyango lweziphene zentliziyo, isifo semithambo, ukusilela kwentliziyo, isifo sentliziyo, kunye ne-electrophysiology.
Ukufunda i-cardiology e-US kunokuxabisa ukuya kuthi ga kwi-200,000 yeedola ngaphandle kweendleko ze-bachelor's okanye premed education.
Ezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US ukufumana isidanga se-cardiology zezi:
Isikolo samayeza kaDavid Geffen
Isikolo seMachiza seMayo Clinic
Ukunyangwa kwengqondo lisebe leyeza elibandakanya ukufunda nokunyanga ukugula ngengqondo, ukuphazamiseka ngokweemvakalelo, kunye nokuziphatha okungaqhelekanga. Kubandakanya ukuxilongwa, ukuthintela kunye nokunyanga ukuphazamiseka kwengqondo.
Iindleko zokufunda isidanga sengqondo kwi-US ukuya kuthi ga kwi-95,560 yabafundi basekhaya ngelixa inokuthi ifike kwi-234,672 ye- $ kubafundi bamanye amazwe kwiminyaka emine yokufunda le kuphela kwemali yokufunda ye-4 iminyaka yokufunda kwaye ayibandakanyi Iindleko zokuphila, izixhobo zokufunda, okanye isikolo esenziwe kwangaphambili okanye kwisidanga sokuqala.
Ezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US zengqondo zezi:
Isikolo seYunivesithi yaseDuke
Ikholeji yaseWillill Cornell
IYunivesithi yaseMassachusetts Medical School
I-Emory University School of Medicine
Icahn iSikolo soNyango kwiNtaba yeSinayi
Izikolo zonyango eMzantsi Afrika zaBafundi beZizwe ngeZizwe
Izikolo zeZonyango eziBiza amaxabiso aphantsi eAustralia zaBafundi beZizwe ngeZizwe
I-11 yeeSayensi zoNyango eziGqwesileyo eCanada zaBafundi beZizwe
Iindleko eziphezulu ze-13 zoNyango kunye neKhowudi kwiKhosi yeKhosi yeNdleko
Gcwalisa uLuhlu lweZikolo zezoNyango eCanada ngeenkcukacha zazo
Izikolo eziBalaseleyo zeZonyango eTexas ngeenkcukacha zazo
Iiyunivesithi zoNyango ze-13 e-Australia zaBafundi beZizwe ngeZizwe
Izikolo zeZonyango ze-24 ezilula ukungena e-UK, US, Canada, Australia, Abanye
ezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-USezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US zentliziyoezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US zonyango lweeurosurgeryezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango eU.Sezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US kunyango lwengqondoezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-US zotyandoezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-USezona zikolo zibalaseleyo zonyango ze-osteopathic e-USezona zikolo zibalaseleyo kwezonyango e-USezona zikolo zilungiselela phambili eMelikaezona zikolo zikarhulumente zikarhulumente zibalaseleyo e-US
Post Previous:Izikolo ezi-15 eziBalaseleyo zoBunjineli boMbane kwiHlabathi liphela
Okulandelayo Post:Iinkqubo ezili-15 zeNursing ezikwi-Intanethi eTexas-ezivunyiweyo
Pingback: Izikolo ezili-13 eziBalaseleyo zeZikolo ze-Ivy League zePre Med 2021
Pingback: Izikolo ezi-9 eziPhambili zeMed Med eCarlifonia 2021